Iikhrayitheriya zokukhetha izisombululo ze-GIS / CAD-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Iimpawu zokukhetha iisombululo zeGIS / CAD
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskGeospatial - GISGvSIGIntelliCADGIS asiboniseMicrostation-Bentley
Namhlanje kuye kwaba ngumhla endibhalileyo ukuba ndibonise kwiklasi ye-cadastre ye-estate estate yaseBolivia. Esi sifundo sijoliswe ekuboniseni indlela yokukhetha iteknoloji yecomputer.
Lo mqondiso owusebenziseleyo, kwaye ingqalelo yam ukuhlalutya kwimeko esithemba ngayo ukuphumeza isisombululo.
Ingxaki kukuba ukuba ufuna ukukhetha ithuluzi elilula lokubanjwa kwedatha kufuneka uqwalasele iinkalo ezingenanto yokwenza kuphela ngokukwazi ukwenza i-vectors, kodwa kunoko ukuzinza okunokuxhaswa njengoko kufuneka ngabasebenzisi bafikelela kuwo kumanqanaba ahlukeneyo kunye nenani labasebenzisi abakufuna iilayisenisi.
Phakathi kweminye imilinganiselo esiye siyicubungula, kwaye ubunzima bayo bunokuhluka ngokuxhomekeke kumxholo welizwe okanye ububanzi, phakathi kwezinye izinto kunokuqwalaselwa:
Ukukhawuleza vrs. Inani labasebenzisi
Ukufumaneka kwe-interfaces yeprogram (API)
Emva koko siye sahlula umongo we geomatic ubuncinane kwiinqanaba ezithandathu kwaye walinganisa izinga lokubaluleka kweenkqubo zangaphambili kumaxesha ahlukeneyo. Ngamanye amabakala anokukhethwa uluhlu lweempawu ezizodwa abasebenzisi okanye iingcali eziphakamisayo kwaye zinikezwa ubunzima ukuze zihlolisise ngendlela yokuthelekisana neenzuzo kunye nokungalunganga kwezicombululo ezahlukeneyo:
1 Isigaba sokwakha
Kule nto, kulindeleke ukuba isisombululo sisebenze kwaye sisebenzise ukuvelisa kumgangatho ophezulu ngabachwephesha abavela kwintsimi, i-digitize, i-topology ecocekileyo, ukudibanisa ulwazi kunye nokusebenzisana nemifanekiso okanye iinkonzo zemephu.
2 Isigaba sokulawula
Kule nto kucatshangelwa, ukuba iinkcukacha ezivelisiweyo zingeniswa kwimigangatho efana nokwamkelwa kwisiseko sedatha okanye umphathi wefayile. Iinjongo ezifana nokugcinwa kwefomathi kunye neAPI ekhoyo kubaluleke kakhulu. Kwaye, kunjalo, izisombululo ezifunwa kule nqanaba lolawulo lweenkcukacha zilindeleke ukuba zisebenze kakuhle kwiindawo ezininzi zeendawo kunye nokukwazi ukugcina iinkcukacha zengxelo ezifana nejometri kunye neenkcukacha ze-raster, kunokuba zibe neendlela ezikhangayo.
4 Isigaba sokupapashwa, kule nqanaba kuqwalaselwa ukuba izisombululo zokwakha idatha ziye zineendlela zokuguqulwa kwimiqathango ye-ogc kwaye ukuba izixhobo zesevisi zedatha zinomgangatho wokwenziwa komntu ukwenzela ukuba zombini iinkcukacha zinokubanjelwa kwaye zikhangeleka zikhangeleka ngobugcisa.
5 Isigaba sokugcina, le nqanaba lesibini lwakhiwo, apho kulindeleke ukuba izixhobo zinakho ukhetho lokukwazi ukulungelelanisa ukufikelela kwabo kulondolozo lweziphumo eziguqulelwe, ukugcinwa kwembali kwimbali kunye kwakhona, kulula ukwakhiwa ngokuchanekileyo. Ukuba kunokwenzeka ukhetho lokwenza isichaso esicacileyo phantsi kwe-activex esebenzayo kwi-inthanethi ... ngcono.
6 Isigaba sokugcina, Ndibizile ukuba, kodwa ngokwenene yinqanaba lokufikelela kwiifowuni, apho abasebenzisi ngaphakathi kweziko lokufikelela, ukuguqula idatha, inkxaso kunye nokuvelisa iimveliso ezintsha. Nayi imfuno kwisisombululo se-CAD / GIS ayifumanekanga ukuzinza kwefomathi nomthamo wokuxhasa ukuguqulela, ngelixa izixhobo zokulawula, ezinokufumaneka ezininzi ekuphuhliseni, imigangatho yokhuseleko kunye nezixhobo zeseva zabasebenzisi.
3 Ukutshintshiselwa kwinqanabaLo kwinqanaba lesibini le ncwadi, ekulindeleke ukuba ukukhonza data kwi XML, GML okanye enye inkxaso imigangatho OGC, iimveliso esithemba ukuba ziya kusetyenziswa nezinye izisombululo geomatics kodwa akangebuyi ilungiswe. Ukuze athi amandla pervertirse phantsi imigangatho geofumados, kuquka ukhetho lwe lula kumda wesangqa ... ewe, kanye geofumados.
Nangona umgaqo kukusebenzisa isicatshulwa sezinto kwizisombululo ezahlukileyo kwinqanaba ngalinye le nkqubo, asimele sikhohlwe umongo wayo; ngoko siye sagqiba kunye umthambo msinya xa umthengi enkulu, nje ngeziko yomhlaba elizweni, ufuna ukuba amaphondo aqalise ngenkqubo ngokupheleleyo imeko ye malunga 20 amagcisa imveliso CAD / GIS, 3 ababhekisi phambili, abasebenzisi 75 intranet kunye nokubonisana ezininzi intanethi (sicime iindleko ngonyaka Oracle $ 30,000 iprosesa, uphuhliso software, kunye namaqela ukuphunyezwa nganye):
Yenza kunye nayo I-AutoDesk inokuhlawula i-$ 180,000, kunye nokulinganiselwa kwisigaba sokugcina iifasimali esifanele ukuzalisana namanye amaxabiso kunye nokusebenza kwezibonelelo zezixhobo ukulungiselela iinkcukacha ngokufanelekileyo nangaphantsi kweenjongo eziphezulu zokupasa.
Yenza kunye nayo I-Bentley inokuhlawula i-$ 210,000, kunye nokunciphisa kwisigaba sokutshintshiselwa, ukushicilelwa okuvela kwizinwele kunye nento kwinqanaba lokufunda
Yenza kunye nayo ISRI ingaba yi-$ 300,000, kunye nemingcele kwisigaba sokwakhiwa kunye neendawo zokugcina iimpahla, oko kuza kuthatha ukuzaliswa kwamanye amaxabiso; ngaphandle kwendlela eya kuvela ngayo ukuba ilayisenisi ye-10 iyadingeka ukuba isongezwe i-$ 9,000
Yenza kunye nayo Iintlobo zingadola i-$ 15,000, kunye nemingeni kwisigaba sokwakha, ikhefu lokufunda kunye nemfuno yabaphuhlisi bokuqala (nangona kukho onke amaninzi ukuphuhlisa). Ndiyacacisa ukuba kukho ezinye izisombululo eziphantsi kweendleko eziphantsi, kodwa ndiyisebenzisa le nto kuba ndizamile ngoku kwaye ndikumangalisile.
Kwimeko embi kukuba ndinayo i-$ 155,000 eyishiye ngaphezulu ukuba ndiqeshe iincwadi ezilungileyo kwaye ukuba ndidlala neelayisensi zexesha lokusebenza ndiyakulinga umgodi womthengi.
Kuyinto ehlekisayo ukuba phantse iphelele ingenziwa nayo software free, Pure GvSIG / Ingca, Postgre, IntelliCAD kunye nezinye imifuno ukuba ungakwazi ukuhlanganisa iqela systematization kweenkqubo, geofumados abaphuhlisi kunye nokuthembeka yokuthengisa le projekthi ... ukuba client akuyiqonda $ 700,000 ... I arhabaxa nzima kuba aphezulu ngayo inani labasebenzisi lingaba lilungelo leprogram ekhululekile okanye iindleko eziphantsi.
Ibhanti UKUQALA Lawulo Ukupapashwa Repositories Intercambio
2 Civil 3D I-Oracle 10G MapGuide
+ eyongezelelweyo ImiSebenzi ye-Navis? + I-Topobase phuhliso kwintlango
bentley 7 Benley Imephu
2 Geopack I-Oracle 10G I-Geoweb Publisher + ukusebenzisana
+ maphepha Iprojekthi ehlakaniphile mmm ... ukukhala kuthiwa
2 ArcScan I-Oracle 10
Injini ye-GIS ArcIMS
GIS Server I-GIS Server kwelinye projekthi uuuuy
asibonise Uphuhliso lwezinto ezingaphezulu
Ilayisenisi ye-20 Yesebenzayo I-EnterpriseOracle 10G Runtime Yendalo Runtime ekugqibeleni Runtime Yendalo
Ngesishwankathelo, ndiyathemba ukuba ndivuselele iinqwenelelo zakho kwiisombululo zamahhala kunye nezindleko eziphantsi, nangona ixesha lifutshane kakhulu ukuba lingaphumi. Sichaze izigqibo ezifutshane ezimfutshane:
Itheknoloji efanelekileyo kukuba: "e no kuzinza"Kwimiba yehlabathi yophuhliso
Akunakuze kubekho iteknoloji "kuhle kuyo yonke into"
Umxholo "wezoqoqosho" kufuneka ucingwe ngokwemiqathango "umjikelo wobomi bobuchwepheshe"Kunye nokusebenzisana kwayo
Iinkqubo ezibhaliweyo (inkqubo) kwandisa umjikelo wobomi bobuchwepheshe
Akubona bonke abakulungele isofthiwe yehhala, ukuqala izicelo zikhethwayo "zorhwebo", Ngamava unokucinga ngezicelo"indleko ephantsi", ngokuziphendulela kwi"mahala"Okanye" uqobo "
Ewe kunokwenzeka ukubonisa iGoogle Earth kwaye ukhangele imifanekiso esuka phezulu ngexesha langempela
I-Google ingena kwiihlabathi ezibonakalayo
I dollar yaseMelika
Umhlobo kunye nawaphi na imali ezi ngxaki?
Ukuba ixesha elidlulileyo ndalubonisa ezinye ixabiso lepulatifomu, ndicinga ukuba uthetha enye yezi zithuba
Sawubona, andiyazi ukuba ndiyakhumbula kakuhle kodwa le tafile ngeendleko zeeplani ezahlukeneyo, ndiyibonile ixesha elide ngaphambi kwaloo mhla evela apho, andiyazi ukuba uyihlaziye, okanye ndiyibukele kwelinye iphepha